Qayb ahaan u kala qayb, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Oo haddana wuxuu gowracay neefkii qurbaanka la gubo ahaa, markaasaa wiilashii Haaruun waxay isagii u keeneen dhiiggii, oo isna wuxuu ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga. Oo haddana waxay isagii u keeneen neefkii qurbaankii la gubayay oo madaxiisa la burburiyey, oo isna wuxuu ku dul gubay meesha allabariga.
Laawiyiintii 3, 9-12 (Tarjumaadda Zurich)
Markii aan ka fekero inaan qalbigayga u dhiibo Rabbiga, waxay u muuqataa waxoogaa iftiin badan waxayna ila tahay aniga mararka qaar inaan si fudud u sameeyno. Waxaan dhahnaa: "Sayidow, halkan waxaan ku siinayaa qalbigayga, waad yeelan kartaa" waxaanna u maleynaynaa inay taasi tahay waxa loo baahan yahay oo dhan. Waxaan rabaa inaan ku tuso in aayadda kore ee toobad keenta ay ka kooban tahay farriin uu Ilaahay waliba doonayo inuu na siiyo.
Mararka qaar markaan Rabbiga ku nidhaahno waxaad qalbigeyga ku leedahay halkan, waxay u egtahay inaan ku hor tuurayo hortiisa hortiis. Taas looma jeedo sidaas. Haddii aan sidan u yeelayno, tawbadkeenkeennu aad buu u dhalaalayaa, oo kama nihin karno tallaabada dembiga. Waxaan kaliya ku tuuraynaa xoogaa yar oo hilib ah dubista, haddii kale si siman looma shiilan doono. Waa isku mid qalbiyadeenna dembiga leh, waa inaan si cad u aragnaa waxay tahay inaan ka leexanno.
Oo haddana waxay isagii u keeneen neefkii qurbaankii la gubayay oo madax ahaa, iyo madaxiisii, oo isna wuxuu ku dul gubay meesha allabariga.
Waxaan ognahay in labada wiil ee reer Haaruun ay dhibanaha u dhiibeen oo ay u dhiibeen aabahood. Iyagu si fudud ugama dhigin neefkii la gowracay guud ahaan meesha allabariga. Waa inaan sameynaa isku mid dhibanayaasheena, qalbiyadeena. Halkii lagu dhahaye, "Sayidow halkaad qalbigayga ku haysataa", waa inaan u jiifsannaa waxyaabo qalbiyadeena Ilaah u nijaasaynaya. “Sayidow waxaan ku siinayaa xantahayga, waxaan qalbigayga ku siinayaa qalbigayga, waxaan kaaga tagayaa shakigayga”. Haddii aan bilowno inaan qalbigeenna Ilaah u siino sidan, isagu wuu aqbali doonaa sidii allabari. Waxyaabaha xun ee nolosheenna oo dhan markaa waxay u rogmadaan dambas meesha allabariga, oo dabaysha Ruuxu ka afuufayso.
Aabe, waxaan kuu keenay gabal yar oo noloshayda ah, mid mid, ilaa aad wax walba haysatid, aamiin
Waxaa qoray Fraser Murdoch,